HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 21-JULY-2020
Tuesday July 21, 2020 - 10:37:09 in Wararka by Mogadishu Times
Wararkii ugu dambeeyey Dhuusamar eeb iyo qorshaha kulan kale oo Xalay dhacaya Wararka aan ka heleyno xarunta madax tooyada Galmudug ayaa sheegaya in mada xda DFS& Dowlad goboleedyada ay mar ka le Xalay isugu imanayeen kulan kale kadib kul
Wararkii ugu dambeeyey Dhuusamar eeb iyo qorshaha kulan kale oo Xalay dhacaya Wararka aan ka heleyno xarunta madax tooyada Galmudug ayaa sheegaya in mada xda DFS& Dowlad goboleedyada ay mar ka le Xalay isugu imanayeen kulan kale kadib kulankii halkaas ku dhex-maray Shalay uu natiijo lahaan noqday . Kulankii Shalay ayaa ku saabsanaa sidii loo jaangoyn lahaa qodobbada muhiimka u ah wadatashiga Heer Federaal iyo Heer do wlad Goboleed, hannaanka geeddi socodka siyaasadda doorashooyinka iyo Amniga Qaranka. Sida aan xogta ku helnay kulanka Shal ay ayaa doodo adag oo ku saabsan doorash ada ay harreeyeen, ayada oo aanay jirin wax isfaham ah oo laga gaaray ajendeyaa sha kulanka weyn ee la filayo inuu Maanta Furmo. Kulanka Xalay ayaa la sheegay in ujeed kiisa uu yahay in wixii Shalay aan la isku fa hmin xal laga gaaro, si kadib shirka si rasmi ah loogu furo berri. Ujeedada ugu weyn ee kulamadan ayaa ah in ayada oo wax la isku raacsan yahay la tago shirka weyn, maadaama uu yahay mid dadka oo dhan iyo warbaahinta u furan isla markaana aan dood iyo buuq lagu muujin karin. Dhinaca wararka aan heleyno ayaa sheeg aya in Villa Somaliya ay weli ku adkeysaney so doorasho qof iyo cod ah iney ka dhacdo Soomaaliya 2020/2021-ka, taasi oo ah caq abadda taagan. Ilo ka tirsan mas'uuliyiinta la kulmay mad axweynaha Soomaaliya Maxamed C/hi saa cadihii tagay ayaa xaqiijiyey iney jirto kala aragti duwanaanshiyo ku saabsan qaabka doorashada oo u dhaxeysa dowladda feder aalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah. Madaxweyne Farmaajo waxaa uu dadka la kulmay u sheegay in la gaaray xilligii Soo maalida go'aan ka gaari lahaayeen dadkii matali lahaa, isla markaana uu rajeynayo in riyadaas uu u dhabeeyo.
Duqa Muqdisho oo ka qeybgalay badbaadinta dad uu ku soo dumay dhisme 3 dabaq ah
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ah na duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Max amed ayaa xalay gaaray halka uu ku soo du may guri ka kooban saddex dabaq degmada Xamar Weyne ee gobolka Banaadir.
Shaqaalaha Gurmadka Gobolka Banaa dir ayaa ku guuleystay inay soo badbaadiyaan illaa 17 ruux oo ku soo dumay gurigan qadiimi ah iyadoo dadkaasi ay lix ka mid ah uu soo gaaray dhaawac. Sidoo kale waxaa halkaas tegey Guddoo miye Ku-xigeenada Maamulka Gobolka Ba naadir ee Arrimaha Bulshada & Howlaha Gu ud, Marwo Basma Caamir Axmed iyo Eng. Cumar Cali Cabdi oo uu la socday gudoomi yaha maamulka degmada Xamar-weyne C/q aadir Maxamed C/qaadir.
Gurmad xoog leh ayaa loo sameeyay da dkii uu ku soo dumay guriga saddexda dab aq ahaa waxaana ay sheegeen maamulka gobolka Banaadir inay baaritaan ku sameyn doonaan sababta keentay in dhismahaasi uu soo dumo.
Guddoomiye ku-xigeennada Maamulka G/Banaadir ee Arrimaha Bulshada & How laha Guud,Marwo Basma Caamir Axmed iyo Eng. Cumar Cali Cabdi ayaa si wada-jir ah u shir Guddoomiyey kulan loogu had layay qaban-qaabada xuska 24 July iyo 1da August oo ku beegan Qaraxii ka dhacday Xarunta Aqalka D/Hoose ee Xamar.
Qaraxaas ka dhacay Xa runta Gobolka ayaa waxaa ku dhintay Allaha u naxariistee Guddoomiyihii hore ee G/Ban aadir Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow), Guddoomiyaal Degmo, Agaasim eyaal iyo Mas’uuliyiin kale oo ka tirsanaa Gobolka.
Kulankaan oo ka dhacay xafiiska Agaa simaha Guud ee Amniga iyo Siyaasadda Ma amulka G/Banaadir, ayaa waxaa goob-joog ka ahaa qaar ka tirsan Agaasimayaasha Gu ud iyo Agaasime Waaxeedyada D/Hoose, iyadoona la isla qaatay in Xuska Dhacdadii 24July iyo 1da August si weyn loo xuso.
Al-shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyada qaraxaas Khasaaraha geystay ee ka dhacay Xarunta Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar, waxaana qaraxaas uu ahaa sida la sheegay mid Ismiidaamin ah oo ay fuliyay Gabar.
Wiil Dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay Uk
Alle ha u naxariistee Magalada Leicester ee dalka Ingiriiska waxaa lagu dilay muwaa din Soomaaliyeed balse heysta dhalashada dalka Holand, kaas oo lagu Magacaabi jiray Xasan Cilmi Jaamac oo da’diisa lagu qiyaas ay 19 ilaa 20 sano jir.
Dilka Wiilka dhalinyarada ah ayaa sida la sheegay waxaa geystay dhalinyaro ku hub ey snaa tooreey,xilli uu ku sugnaa banaanka hore Guriga uu ka deganaa Magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska.
Mid kamid ah Soomaalida ku nool M/L eicester ee dalka Ingiriiska kuna sugnaa me el aan ka fogeen halka uu dilka ka dhac ay ayaa waxaa ay sheegeen in ragga dilka gey stay ay Soomaali kale ay ahaayeen,isla mar kaana lagu raadjoogo. Wararka ayaa wa xaa ay intaasi ku darayaan in Goobta ay ta geen Ciidamo ka tirsan Booliska Uk,iyaga oo how lgal ay sameeyeen ay ku qabteen Qof looga shakisan yahay Dil ka Marxuumka, kaas oo ay baaritaan ku hayaan.
Wasiirka arrimaha dibedda Nigeria oo Corona laga helay
Wasiirka arrimaha dibedda Nigeria Geoffrey Onyeama ayaa laga helay xannuun ka Covid-19.
Waxa uu xubin ka yahay guddiga dowlad da Nigeria u qaabilsan ka jawaabcelinta cor onavirus
Mr. Onyeama ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitter-ka waxa uu ku sheegay inuu isku karantiilaya xarun caafi maad.
Wuxuu intaasi ku daray in uu baaritaanka sameeyay ka dib markii uu isku arkay cuncun dhuunta ah, taasoo ah mid ka mid ah calaamadaha fay raska Corona.
Madasha Xisbiyada Qaran oo War kasoo saartay Xaaladda Afgooye
Madasha Xisbiyada Qaran oo shir zoom deg deg ah yeelatay ayaa farriin xasaasi ah oo la xiriirta xaaladda fatahaadda dalka la wadaagtay DF&Dowladaha xubnaha ka ah.
Madasha Xisbiyadda ayaa dowladda So omaaliya ka dalbatay in si deg deg ah loo ca awiyo Shacabka Magaalada Afgooye.
Waxaa sidoo kale sheegtay inay qeyb qa adan doonto gurmadka dadka ku dhibaatey san Afgooye.
Warbixin ay soo saar tay Wasaaradda gar-ga arka iyo maaraynta mu siibooyinka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Kumanaan Qoys oo ku noolaa Degmada Afgooye iyo guud aha an Gobolka Shabeellada hoose ay saamayn ba’an ku yeelatay fatahaadda Webiga Sha beelle.
Degmada Afgooye ayaa la sheegayaa in ay ka barakaceen 300 Qoys, halka Tuulooyi nka Irdoole, Balbaley, Ballow, Jambaluul, Mareeray, Sabiib iyo Caanoole, ay Guryah ooda ka baxeen 1500 oo Qoys.
Khayre iyo Qoorqoor oo jimicsi u tagay Dhuusamareeb Stadium
Md.Xasan Cali Khayre, R/Wasaaraha Somaliya iyo Madaxweynaha Galmudug, Ax med Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa gelinkii dambe ee Axadii indho-indhayn iyo jimicsiba u tagay Garoonka Kubadda Cagta ee M/Dhu usamareeb.
Dhuusamareeb Stadium (Garoonka M/Dhu usamareeb) ayaa heer geb-gabo maraaya dayactirkii lagu waday muddooyinkii ugu damb eysay,iyadoona dhawa an lagu wado in xariga laga jaro.
R/Wasaaraha Somaliya iyo Madaxwey naha Galmudug ayaa markii dambe leyli jim icsi kula qaatay Dhuusamareeb Stadium bahda cayaaraha ee magaaladaasi.
R/Wasaare Khayre ayaa tan iyo Talaada dii ku sugan M/Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug, si uu uga qaybgalo shirka maalmaha ina soo aaddan lagu wado inuu uga furmo DFS&D/Goboleedyada.
Dowlad Goboleedyada oo faah faahiyay kulankii ay la qaateen Madaxda Dowladda
Madaxweynayaaasha Dowlad Goboleedy ada, Puntland, koonfur Galbeed, Jubbaland, Hir-Shabeelle iyo Galmudug ayaa waxaa ay ka hadleen kulankii ay M/Dhuusamareeb kula qaateen Mada xweyne Farmaajo & R/ Wasaare Kheyre.
War kasoo baxay Xa fiiska Madaxweyna ha Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in Madaxweyne Deni uu ka qeybgalay kulankii 1aad ee rasmi ah ee Shirka wadatashiga Ma daxda DF iyo Dowladdaha xubnaha ka ah, iyaga oo ka wada tashanayay arrimaha mas iiriga ah ee dalka sida Doorashadda 2020/ 2021.
War kasoo baxay Xafiiska Madaxweyna ha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa lagu sheegay in Xarunta Madaxtooyada Gal mudug ee Dhuusamareeb uu Madaxweyna ha kaga qaybgalay kulan horudhac ah oo ay yeesheen Masuuliyiinta DF& D/Xubnaha ah.
Kulankan ayaa gogol xaar u ah shirka Wadatashiga DF &Dowladaha xubnaha ka ah ee lagaga tashanayo wakhtiga kala guur ka ah kaas oo dhawaan ka furmaya M/Dhuu somareeb ee Caasimada Galmudug.
Si lamid ah Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada, Hir-Shabeelle, K/Galbeed & Galmudug ayaa waxaa ay shaaciyeen inay ka qeyb-galeen kulanka horudhaca u ahaa shirka u qabsoomaya Madaxda Dowladda & Dowlad goboleedyada.
Dowladda Soomaaliya oo Warbixin kasoo saartay xaalad ka taagan Sh/Hoose
Warbixin ay soo saartay Wasaaradda ga r-gaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soo maaliya ayaa lagu sheegay in Kumanaan Qoys oo ku noolaa Degmada Afgooye iyo guud ahaan Gobolka Shabeellada hoose ay saamayn ba’an ku yeelatay fatahaadda Web iga Shabeelle.
Degmada Afgooye ayaa la sheegayaa in ay ka barakaceen 300 Qoys, halka Tuulooy inka Irdoole,Balbaley, Bal low, Jambaluul, Mareeray, Sabiib iyo Caanoole, ay Guryahooda ka baxeen 1500 oo Qoys.
Warbixinta ay soo saartay W/gar-gaarka Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in 291 Qoys ay u barakaceey Degaanka Janna ale oo lafteedu ay ka taagan tahay cabsi ku aaddan fatahaadda Webiga Shabeelle inuu soo gaaro.
Dadka ku dhaqan Tuulooyinka Dagwari iri, Cadiimoole, Awdheegle, Waagaadi iyo Mi shaani ayaa iyagana qaba baqdin la xiriirta fatahaadda Webiga Shabeelle.
Maamulka deegaanka Wisil ee G/Mudug ayaa faahfaahin ka bixiyay Khasaaraha ka dhashay Dab xoogan oo Shalay qabsaday dhul beereed ballaaran oo ku yaalla halkaas.
Ku dhawaad 20 beerood ayuu dabku baa ba’shay, xoolana waa ay ku dhinteen sida ay warbaahinta ay sheegeen maamulka wisil ka dib markii Dab xooggan oo ka dhashay deegaanka Maraadheere oo ka mid ah de egaanada Hobyo hoostega.
Qaar ka tirsan Beerala ydii khasaaruhu soo gaaray ayaa ka warramay Musiib ada dhacday, iyagoo tilma amay in dabka uu ka baabi’iyay dhul beele ed, isla markaana waxaa ay dalbadeen caa wimaad la xariirta Miraha tabaca.
Guddoomiyaha deegaanka Wisil Cali Xa san iyo Cali Ducaale ayaa Hay’addaha Dow ladda Soomaaliya ee Arrimaha Gargaarka & kuwa Galmudug ugu baaqay in ay ka jawaa baan dhibaatada hantiyadeed ee soo gaar tay dadkii beeraleyda ahaa.
Sidoo kale wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in dabkii xooganaa ee Shalay uu sameeyay dhul baaxadiisu gaar ayo 25-km oo isku weer ah.
Natiijada baaritaanka diyaaraddii ku burbrutay Beledweyne oo la soo saaray
Baaritaanada la sameeyay ayaa muujin aya inaanu dameer sababsan burburka diya araddii maalintii Talaadada ku burburtay Ga roonka Ugaas Khaliif Ugaas Rooble ee Mag aalada Beledweyne.
Ka dib burburka diyaaradaasi ayaa wa xaa suuqa soo galay in dameer ku sugnaa Garoonka Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, xilli gii ay diyaaradda ka caga dhiganeysay uu keenay burburka diyaaradaasi, ka dib markii duuliyihii diyaaradda uu mid ka mid ah gara byada ay diyaaradda ku duusho ku dhufsad ay dameerkaasi.
Md.Cali Jeyte Cismaan, Gudoomiyaha G/ Hiiraan ayaa Shalay sheegay in baaritaan badan oo la sameeyay lagu ogaaday in aa nu dameer sababsan burburka diyaaradaasi.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in tan iyo 14-kii bishan oo diyaaraddu dhacday, ay wadeen baaritaano ballaaran, ayna cadaatay inaanu jirin wax dameer ah oo Garoonka Magaala da Beledweyne soo galay.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Garoonka Beledweyne si adag loogu wareejiyay silig, isla-markaana aanay suurtagal ahayn in da meer ama xayawaan kalaba uu gudaha u soo galo garoonkaasi.
Gudoomiye Jeyte ayaa ka dhawaajiyay xi lligii diyaaradda ay dhaceysay in Garoonka Beledweyne ay ku sugnaayeen laba Sarkaal oo ka kala tirsan Booliska Somaliya iyo Ami som, kuwaa oo xilligaa muuqaal ka duubaa yay diyaaradda, isla-markaana aanu muuq aalka muujinayn wax dameer ah oo gudaha ugu jira garoonkaasi.
Jeyte oo la hadlay BBC ayaa xusay ina anu kala cadayn karin in diyaaradda ay lug u baxday iyo in kale, balse ay fahamsan yihiin in diyaaradda ay baalka bidix ku dhufsatay carro tuur tiilay meel gees ka ah garoonka. Jeyte waxa uu intaa ku daray diyaaradda ina anay dhexda uga degin dhabaha diyaarada ha ku cararaan, ha yeeshee ay ku soo de gtay dhinaca bidix ee garoonka.
Mar la weydiiyay waxa keenay in mudada intaa le’eg ay ku qaadato baaritaanka ay Shalay natiijadiisa soo saareen ayaa sheeg ay inay ku hawlanaayeen, sidii ay xaqiiqda u ga sal gaari lahaayen.
Diyaaradan ayaa dalka Jabuuti ka soo qaaday gargaar bani’aadanimo, oo ay Dowl adda Jabuuti ugu talagashay dadka reer Bel edweyne, kuwooda ay fatahaaduhu saamee yeen. Diyaaradan oo nooceeda uu yahay ku wa xamuulka ayaa ka hor inta aysan garga arka ka soo qaadin dalkaasi Jabuuti, waxa ay ka amba-baxday Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland oo dalab culus u gudbinaya Maxkamadda sare
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa ayaa waxaa la iflayaa in saacadaha soo scda uu Maxkamadda Dastuuriga ee So omaaliland uu u gudbiyo dalab Culus oo ku saabsan inay soo saarto go’aan lagu fsaxa yo tirakoob la’aan la galo doorashada wakiill ada iyo deegaanka.
Wararka la helay ayaa waxaa ay sheegayaan in arrintaan ay kad ambeys ay,ka dib markii natiijo la’ aan uu kusoo dhamaady ku lan gaar ah oo ay yeesheen Madaxweynaha Soomaaliland, ku xigeenki isa iyo madaxda xisbiyada siyaasaddu & hoggaanka dhaqanka ee gobalka Awdal, iy aga oo dalbanayay in doorashada lagu galo tirakoob la’aan. Maadaama oo gobalkaas ay ka imaanayso cabashada ugu daran.
Kulanka intii uu socday ayaa waxaa ara gti kala duwanaan ay soo kala dhex-gashay hoggaanka dhaqanka taas oo ku aadann aq balaadda ama diidista baaqaas,iyada oo ta asi ay keentay in Madaxweyne Muuse Biixi uu Maxkamadda Dastuuriga uu u gudbiyo in tirakoon la’aan la galo doorashada Wakiil lada iyo deegaanka.
Xisbiyada siyaasada Soomaaliland ayaa dhowaan ka heshiiyey khilaafaad u dhexeey ey oo caqabad ku ahaa doorasha da,waxaa na sidoo kale Madaxda Xisbiga talada haya ee Kulmiyo uu dadaal u galay in tirakoob la ’aan la qabto doorashada.
Sannadkii 2005-tii ayaa maxkamadda sa re ee Soomaaliland soo saartay go’aan ah in inta doorashada dambe aan la gaarin la sam eeyo tirakoob guud oo lagu salaynayo saami qaybsiga kuraasta wakiillada. Laakiin 15 kii sano ee doorashadaas ka dambeeyey lagu ma guulaysan tirakoobkaas.
Al-Shabaab oo afduubtay 60 qof oo isugu jira odayaal, haween iyo caruur
Wararka aan ka heleyno gobolka Bay wa xay sheegayaan in dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dad badan ka afduubt een tuulooyin hoos taga degmada Buur-hakaba.
Dadka ay afduubteen Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu sheegay in ka badan 60-qo food,oo u badan odayaal, haween iyo caruur
Dad ku nool deegaanka Lahobare oo hoos taga degmada Buur-hakaba, isla mar kaana ah halka laga afduubtay dadka ugu badan ayaa Caasimada Online u sheegay in Al-Shabaab dadkoodii ay la’aadeen dhanka deegaanka Iidaale oo ay maamulaan.
Dadka noo waramay oo codsaday in m agacyadooda aan warbaahinta loo isticmaalin ayaa sababta loo afduubtay dad kaas noogu sheegay inay salka ku heyso, dagaal maalmo ka hor ka dhacay goob war-biyood ah oo lagu murmay.
Sida dadkan ay noo sheegeen Al-Sha baab ayaa biyihii ku jiray goobtaas waxay isku dayeen inay ka iibiyaan dadka deegaan ka, waxaana arrintaas ka dhiidhiyey oo dag aal ku qaaday dhalinyaro is-abaabushay oo ka soo jeeday dadka deegaanka.
Dhalinyaradii deegaanka oo looga awo